Sidee Lacag-bixinta Bluetooth-ku U Furayaan Soohdin Cusub | Martech Zone
Sida Lacag-bixinta Bluetooth-ka ay u Furayaan Xuduudo Cusub
Jimco, Diisambar 3, 2021 Khamiista, Diseembar 2, 2021 Sesie Bonsi
Ku dhawaad ​​qof kastaa wuu ka cabsadaa soo dejinta app kale markay u fadhiistaan ​​cashada makhaayadda.
Sida Covid-19 uu u horseeday baahida dalabka iyo lacag-bixinta aan lala xidhiidhin, daalka abka wuxuu noqday calaamad labaad. Tiknoolajiyada Bluetooth-ka ayaa loo dejiyay inay hagaajiso macaamil ganacsiyadan maaliyadeed iyadoo u oggolaanaysa lacag-bixinno aan taabasho lahayn oo kala fogaansho dheer ah, iyadoo ka faa'iidaysanaysa abka jira inay sidaas sameeyaan. Daraasad dhowaan la sameeyay ayaa sharraxday sida masiibadani ay si weyn u dardargelisay qaadashada tignoolajiyada lacag-bixinta dhijitaalka ah.
4 ka mid ah 10kii macaamiisha US ayaa u wareegay kaadhadhka aan lala xidhiidhin ama boorsada mobaylada sidii habka lacag bixinta aasaasiga ah tan iyo markii uu dhacay Covid-19.
PaymentsSource iyo Banker Maraykan ah
Laakiin sidee bay tignoolajiyada Bluetooth uga cabbiraysaa horumarka tignoolajiyada lacag-bixinta kale ee aan xidhiidhka lahayn sida QR codes ama isgaadhsiinta goobta u dhow (NFC)?
Way fududahay: Awood-siinta macaamiisha. Jinsiga, dakhliga, iyo bulshada dhamaantood waxay saameeyaan sida uu macaamiishu diyaar ugu yahay isticmaalka tignoolajiyada lacag bixinta moobaylka. Laakiin sida qof kastaa u heli karo Bluetooth, waxay soo bandhigaysaa rajooyin yididiilo leh oo lagu kala duwan yahay hababka lacag bixinta waxayna leedahay awood ay ku gaadho dadyow kala duwan. Waa kan sida Bluetooth-ku u furayo soohdimaha cusub ee ka mid noqoshada maaliyadeed.
Dimuqraadiyeynta Lacagaha Xidhiidh la'aanta ah
Covid-19 waxa uu si qoto dheer u bedelay mawqifyada macaamiisha ee ku aaddan lacagaha aan la xidhiidhin iyada oo taabashada jidhku yar tahay ee Goobaha Iibka (POS) noqday lama huraan. Dib u noqoshona ma jirto - the korsashada la dedejiyey Tignoolajiyada lacag bixinta dhijitaalka ah ayaa halkan u jooga inay sii joogaan.
Aynu ka soo qaadanno xaaladda yaraanta microchips kuwaas oo mar hore si xun u saameeyay saadka. Waxay la macno tahay kaararku way baaba'ayaan ka hor lacagta caddaanka ah iyo, taa beddelkeeda, taasi waxay saamayn xun ku yeelanaysaa gelitaanka dadka ee xisaabaadka bangiga. Sidaa darteed, waxa jirta degdeg ah oo lagu hagaajinayo hababka lacag bixinta ka hor inta aanay tani dhicin.
Kadib, xitaa cryptocurrency, waxaa jira dichotomy la yaab leh. Waxaan haynaa qiimo si dhijitaal ah u kaydsan oo lacag ah, weli dhammaan kuwan isweydaarsiga crypto iyo boorsooyinka ayaa wali sii wada oo bixiya kaararka. Farsamada ka dambeysa lacagtaan waa dhijitaal, sidaas darteed waxay u muuqataa mid aan la fahmi karin in aysan jirin qaab lagu bixiyo lacagaha dhijitaalka ah. Ma kharash baa? dhib la'aan? Mise hoos ayay u dhacday kalsooni darro?
Iyadoo hay'ad maaliyadeed ay had iyo jeer eegayso siyaabaha loo geeyo adeegyada ganacsiga, ma u ekaan karaan inay gacmahooda ku helaan marinnada. Taasi waa halka loo baahan yahay habab kale oo lagu soo bandhigo khibradaha togan ee dhinaca hore.
Waa tignoolajiyada Bluetooth-ka taasoo siisa baayacmushtarka iyo macaamiisha marin-u-helid, dabacsanaan, iyo madax-bannaani habka ay u doortaan midba midka kale qiimaha ku kala beddelanayo. Wixii cunto ah ama khibrad tafaariiqeed ah waa la fududayn karaa maadaama aysan jirin baahi loo qabo in la soo dejiyo abka kala duwan ama xitaa sawir QR code. Marka la dhimo khilaafka, khibradahani waxay noqdaan kuwo ku habboon, loo wada dhan yahay, oo dhammaan la gaari karo.
Ubiquity Guud ahaan Noocyo kala duwan ee Qalabka Gacanta
Marka la eego suuqyada soo koraya iyo bulshooyinka dhaqan-dhaqaale ee hoose, waxa muuqata in taariikh ahaan laga fogeeyay hay'adaha maaliyadeed ee soo jireenka ah. Tani waa sababta oo ah tignoolajiyada NFC, sida Apple Pay, lagama taageero dhammaan aaladaha oo qof kastaa ma awoodi karo iPhone. Tani waxay xaddidaysaa horumarka waxayna u kaydinaysaa sifooyin iyo adeegyo gaar ah heer sare oo leh qalab elektaroonik ah oo gaar ah.
Xataa koodhadhka QR ee u muuqda meel walba waxay u baahan yihiin kamarad tayo sare leh oo dhammaan taleefannada gacanta laguma qalabeeyo shaqadaas. Koodhadhka QR si fudud ma soo bandhigaan xal la miisaami karo: Macaamiisha weli waa inay ku dhow yihiin koodka wax kala beddelashada si uu u dhaco. Tani waxay noqon kartaa warqad jireed ama qalab u shaqeeya sidii dhex dhexaadiyaha u dhexeeya lacag-hayaha, baayacmushtarka, iyo macaamilka.
Dhanka kore, labaatankii sano ee la soo dhaafay, Bluetooth waxaa laga daayay taleefan kasta, oo ay ku jiraan aaladaha tayadoodu hooseeyso. Taasina waxay la timaadaa fursadda lagu sameeyo macaamil maaliyadeed Bluetooth, taasoo u oggolaanaysa isticmaalayaasha inay ka faa'iidaystaan ​​tignoolajiyada markii hore aan la gaadhin. Tani waxay la mid tahay awood siinta macmiisha maadaama qalabkii gabi ahaanba meesha laga saaray wax kala iibsigana uu ku lug leeyahay POS-ka baayacmushtarka iyo macmiilka.
Bluetooth-ku waxay haweenka u keentaa fursado badan
Ragga ayaa muujiya xiisaha ka badan kuwa dumarka adigoo isticmaalaya boorsada gacanta ee internetka iyo wax iibsiga dukaamada laakiin ku dhawaad ​​60% ee go'aamada lacag bixinta waxaa sameeya haweenka. Halkan waxaa yaal kala go'a iyo fursad weyn oo haweenka si ay u fahmaan awoodda cusub, technology soo baxaya.
Naqshadeynta tignoolajiyada lacag bixinta iyo UX inta badan waxaa naqshadeeyay ragga, marka la eego abuurista hantida ama cryptocurrency, way iska caddahay in dumarka laga tagay. Lacag-bixinta Bluetooth-ka waxay siisaa isku-dhafka haweenka leh khibrad hubin, fudud, iyo kuwo ku habboon.
Aasaasaha madal tignoolajiyada maaliyadeed oo awood u siinaya khibradaha lacag-bixineed ee aan taabashada lahayn, waxay ahayd muhiim in dumarka maskaxda lagu hayo go'aamada UX, gaar ahaan suuqyada soo koraya. Waxaan sidoo kale dareemnay inay ahayd muhiimada ugu weyn in la shaqaaleysiiyo maamulayaasha haweenka iyada oo loo marayo isku xidhka shabakadaha warshadaha lacag-bixinta sida Shabakadda Lacag-bixinta Haweenka Yurub*.
Tobankii sano ee la soo dhaafay, boqolleyda heshiisyada raasamaal ganacsi ee galay haweenka aasaasay ku dhawaad laban laabmay. Iyo qaar ka mid ah apps-yada ugu wanagsan ee la heli karo waxaa nashqadeeyay dumar ama waxay leeyihiin dumar doorar maamulaha lacag bixinta. Ka fikir Bumble, Eventbrite, iyo PepTalkHer. Iyadoo taas maskaxda lagu hayo, haweenku sidoo kale waa inay safka hore kaga jiraan kacaanka Bluetooth-ka.
Horumarradii ugu dambeeyay ee Bluetooth-ka waxay si toos ah ugala xiriiri karaan aaladda POS ee baayacmushtarka, kombuyuutarrada qalabka, ama software-ka si toos ah codsi. Fikradda ah in app bangi mobilada ee jira laga faa'iidaysan karo si uu ula macaamilo Bluetooth-ka, oo lagu lammaaniyo dabeecadda Bluetooth-ka ee meel walba, taasoo keenaysa fursado kuwa ka soo jeeda asal-dhaqaale bulsho, lab iyo dhedig, iyo ganacsiyo kala duwan.
Shaacinta: Madaxweynaha EWPN wuxuu ku fadhiyaa looxa Bleu.
Tags: tufaax paybuluugBluetoothlacagaha bluetoothxiriir la'aanlacagaha aan lala xiriirinCOVID-19cryptocurrencybixinta dijitaalkatignoolajiyada lacag bixinta dhijitaalka ahsuuqyada soo baxayaShabakada lacag bixinta dumarka Yurubfarsamada dhaqaalahafintechka shaqeynta lacag-bixinta moobilkalacag bixinta mobiladajeebka mobiledhow isgaarsiinta goobtaNfcmasiibobixinta lacagtaisha lacag bixintaPOSQR Codeuxux go'aamo
Sesie waa qareen leh aqoon sare iyo aqoon dhinacyada farsamada gacanta iyo kaabayaasha oo ay ku jiraan laakiin aan ku xaddidnayn xeerarka isgaarsiinta caalamiga ah, nidaamyada lacag-bixinta mobilada iyo xeerarka maaliyadeed, m-ganacsiga, iyo xeerarka ganacsiga bulshada. Ciyaartoyga firfircoon ee dhiirigelinta leh ee leh xirfado falanqayn ganacsi oo heersare ah iyo awoodda falanqaynta iyo horumarinta hababka ganacsiga ee tignoolajiyada mobilada. Waxay ku haysaa laba shati oo tignoolajiyada lacag bixinta ah. Partner Visa Technology, iyo FIS Fintech Accelerator Cohort 1 aasaasaha. Xirfadle wax ku ool ah oo dadaal badan lehna asal kala duwan xagga ganacsiga, ganacsiga, sharciga, iyo qaab dhismeedka ururka.
Edgemesh: ROI ee Xawaaraha Ecommerce ee Adeeg ahaan